I am working for the Country, not for Government.
kklatt ယောသား's invitation is awaiting your response
kklatt ယောသား would like to connect on LinkedIn. How would you like to respond?
Operation Manager at Fairway Maritime Services Co.Ltd
Confirm you know kklatt
Posted by Sir Yaw | |0comments
Confirm that you know kklatt
ဒီနေ့ အိမ်သုံး Gas သွားထုတ်တာ ကံကောင်းသွားတယ်။ဒီနေ့တော့ Gas တစ်အိုးမှ ၆၀၀၀ ကျပ်ပဲပေးရပေမယ့် မနက်ဖန်ကျယင် ၁၅၀၀၀ ကျပ်ဈေးတက်မယ်ဆိုပြီး ဒဂုံက ဆိုင်မှာ ကျောက်သင်ပုန်းမှာ ရေးထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက လောင်စာဈေးတွေတက်တော့ လမ်းတွေလျှောက်ကြတယ်။
အခုလည်း မနဿတလေးမှာ ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ တကယ်တမ်းဆို ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ အစိုးရတွေဆို ကုန်ဈေးနှုန်း တစ်ခုတက်မယ်ဆို သေချာကြေငြာသင့်တယ်။အခုတော့ ဘာမှန်းမသိဖူး ဆိုင်ရောက်မှသိရတယ် တကယ်လို့ မနက်ဖန်မှ သွားပြီး ငွေကအတိအကျပဲ ယူသွားခဲ့မယ်ဆိုယင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။သွားရလာရတာကလည်း အဝေးကြီးတွေ။ ကုန်ဈေးနှန်း တစ်ခု အပြောင်းအလှဲ ဖြစ်တယ်ဆိုယင် အကျိုးသက်ရောက်မှု့ကတော့ အနည်းအများဖြစ်မှာပာပဲ။ အားလုံးကမီးဖိုချောင် စရိတ်တွေတက်လာတော့မယ်။
ဘယ်သူမှတော့ ဒီကိစဿစကို အလေးထားကြမှာမဟုတ်ပာဖူး။ အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ ဝင်ငွေတိုးလာမှာပော့ ပြည်သူတွေကတော့
ဒီတစ်ခါရေးရတဲ့ ပို့စ်က အရမ်းအရသာရှိလို့ရေးလိုက်တာပါ။ အင်တာနက်ကလည်းရန်ကုန်မှာနေယင် မသုံးဖြစ်တာများပါတယ်။
အခုဒီနေ့မှသု့းကြည့်တော့ ဘလော့တွေပွင့်နေတာတွေရပြီး အရမ်းပျော်မိပါတယ်။
ဘလော့ဒေးနေ့က ညနေပိုင်းမှာ ဘလော့ဂါတွေ ပြောချင်ရာပြောကြလို့များလား၊ ပြောကြတာလဲ ကြားယင်တော့မီလွယ်ဖူး။
ဘလော့ဂါတွေလည်း လူနည်းနေပြီလေ။ အသစ်တွေလည်းရောက်မလာ လူဟောင်းတွေကလည်း ပျောက်ကွယ် ထွက်ပြေး။
ရှိတဲ့လူနဲ့ ဖြစ်အောင်စီစဉ်လိုက်တဲ့ မောင်ဂေါက်ကိုတော့ချီးကျူးပါတယ်။ လူမရှိတာထက်ငွေမရှိတာကပိုဆိုးတယ်။ စပွန်တွေကလည်း မဆာကြတော့ဖူး အားလုံးဗိုက်အင့်ပြီး နင်နေကြတယ်ထင်ပါရဲ့။
တစ်ရက်တော့ မောင်ယော ရုံးခန်းထဲမှာ Duty စဝင်ပါပြီ။အယင် အရာရှိက တရုပ်သူကသေချာလွဲပေးခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်အချိန် ဘယ်သူတွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပေါ့။မောင်ယောလည်း သူပြောတာသေချာ မမှတ်တော့ သူ့ဖာသာပဲ ကြော်ငြာ သင်ပုန်းမှာ တရုတ်လို ရေးပြီး Crews တွေ အလုပ်လာမေးယင် ဒါကိုပဲပြလိုက် ဆိုတော့
အဆင်ပြေပြီပေါ့။တရုတ်တွေကလည်း တရုပ်တွေပဲ ဖူကျန်းက တရုတ်တွေလောက် ညံ့တာ ရှိမှာမဟုတ်ဖူး။
You , me, ok,no ok ကလွဲပြီးဘာမှကို နားမလည်တာ။နိုင်ငံတကာသုံးဘာသာဖြစ်တဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန် ကို မနားတမ်းသုံးပြီး မနဲရှင်းပြရတယ်။အာလည်းပေါက် လက်လည်းညောင်းတယ်။အလုပ်ခိုင်းယင် တရုပ်အချင်းချင်း သူ့အရာရှိတွေပြောမှ အဆင်ပြေတယ်။အင်္ဂလိပ်လို ပြောလို့ကတော့ရူးသွားမယ်။ညဖက်တစ်ခါတလေ ထမင်းကြော်ကြော်စားတာကို တရုပ်လေးက ညတိုင်းကြော်ကြွေးပါတယ်။သူ့လက်ရာလေးက မဆိုးပါဖူး။စားလို့အဆင်ပြေတယ်။သူကလည်း အလားကားလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဖူး ညဖက်တာဝန်ချိန်မှာ ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ ဘာစားမလဲ ဘာသောက်မလဲပဲ
မေးနေတာ မစားယင်သူက စိတ်မကောင်းဖူးဆိုပဲ။ တကယ်တော့ သူကထမင်းချက်ခန်းထဲမှာ နားချင်လို့ ကြော်ကြွေးတာ။အဲတစ်ရက်တော့ဗျာ ကိုရွှေတရုပ်က ဘာမှ မချက်ဖူး။ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ့နေ့ကြမှ ဗိုက်ကဆာတော့ ကိုယ်ကပဲစမေးရတော့တာ့ပေါ့။”You dotay no maekan lar” “Yes me no marken”
ပြီးတော့ သူဆက်ပြောလိုက်တာက လက်ဟန်နှင့် ထမင်းဟင်းချက်တဲ့ပုံ လုပ်ပြပြီး
“Today me no working no working”ဘာလဲပေါ့ Duty လဲဝင်နေတယ် ဘာလို့ No working လို့ပြောတာလဲဆိုပြီးတော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတာ။သူ့လက်ဟန်ခြေဟန်ကို ကြည့်မှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ်။သူဒီည ထမင်းမကြော်တော့ဖူးလို့ပြောတာကိုး။ok ဆက်ကြရအောင် သူပဲ တစ်ရက်
ရုံးခန်းထဲမှာ သူ့ကိုမောင်ယောက စာလေးတွေသင်ပေးတာ သူကလည်း အရမ်းကြေနပ်တယ်။ဒါပေမယ့်ခက်တာ
က ဒီနေ့သင်နောက်နေ့မေ့။ကြာတော့ မောင်ယောလည်း စိတ်တိုလာတော့ပြောမိတာပေါ့။
“Your memory no good” သူကလည်းမောင်ယောပြောတဲ့ Memory ဆိုတာဘာမှန်းမသိဖူး။
ပြန်မေးနေတယ် မောင်ယောလည်းနည်းပေါင်းစုံစဉ်းစားပြီးရှင်းပြတာ စိတ်တိုတာတောင်ပျောက်သွားတယ်။
နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှ ရှင်းပြလို့မရတော့ သူ့ရဲ့ခေါင်းကို လက်ညှိုးထိုးပြပြီး “Your this one no good “
ဆိုတော့ သူကနားလည်တယ်ဗျာ။”Yes me no good this”သူ့ခေါင်းသူလက်ညှိုးထိုးပြပြီးပြောနေတာ ပြီးတော့ဆက်ရှင်းလိုက်ပါသေးတယ်။အမူအယာလေးနှင့်
“me small small” လှေခါးတက်တဲ့ ပုန်စံလုပ်ပြပြီးတော့ မောင်ယောကို လှည့်မေးလိုက်သေးတယ်။
Small Small ဆိုတာ ငယ်ငယ်တုန်းကကို ဆိုလိုတာပါ။အသက်ကိုပြောတာ။
“You understand Lar”
“Yes I understand go ahead”
သူကဆက်မပြောတတ်တော့လို့ ပက်လက်လှန်ပြတဲ့ ပုံလုပ်ပြပြီး ပြုတ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးငယ်ထိပ်ပုတ်ပြပြီး
“This no good” ဆက်သေးတယ် နောက်စေ့ကို လည်း”This no good”
နောက်တော့သူ့ကို ဘာမှကို ရှင်းမပြတော့ဖူးပြောယင်ခေါင်းညိတ်ပြီး နားထောင်နေတယ် ဘာတွေပြောမှန်းတော့မသိဖူး။
အဲနောက်တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ် သူကမှ ပိုဆိုးတယ် ရှေ့မှာရေးခဲ့သလိုပဲ တရုတ်အရာရှိက သူ့လူတွေ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကြော်ငြာသင်ပုန်းမှာ ရေးထားတာ မောင်ယောလည်းတာဝန်ချိန်ဆိုတော့ ကွန်ပြူတာလေးတွေဖွင့် ပုံလေးတွေခိုးကြည့်နေတုန်း Sir today what I do
“You see this” ကြော်ငြာသင်ပုန်းကိုလက်ညှိုးလေးထိုးပြတော့ အဆင်ပြေပြီထင်တာ။
တရုတ်က ထွက်မသွားသေးပဲ ဖင်ကုတ်ခေါင်းကုတ် မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ဘာပြောတယ်မှတ်လည်း
“Sir me no understand this”
“Hay that is Chinese Language me no China me Burma “
သူကဘာဆက်ပြောလည်းဆိုတော့ သူတရုတ်လိုလဲ စာမတတ်ပါဖူးတဲ့ အဲဒီတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့
မောင်ယောကပဲ တရုပ်အရာရှိကို မေးပြီးသူ့ ကိုရှင်းပြပေးပါဆိုတော့ သူ့ကိုရှင်းပြရမှာကြောက်တာနှင့်ပဲ
မင်းဒီနေ့ သန့်ရှင်းရေးပဲလုပ်တော့ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်ရတယ်။သူ့တရုပ်အရာ ရှိလည်းတော်တော် စိတ်ညစ်သွားတယ်
Posted by Sir Yaw | | 1 comments
ဆြာယာနှင့် မင်းဒသ အတွေး
ခေတ်အဆက်ဆက် မှာ ရာမာရဏ ဇာတ်တော်တွေ ရှိခဲ့ာကတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံက ပဲရေးရေး ဇာတ်တော်လာ အဓိက ဇာတ်ဆောင်တွေ သဘောတရားတွေ
မပျောင်းလဲခဲ့ဖူး။သီတာမင်း သမီးနှင့် ရာမမင်းသားကြိုက်မယ်။
ဒသဂီရိက လူကြမ်း ကြားထဲက ကြာကူလီ ရိုက်မယ်။
လက္ခဏာက ရာမညီတော် သီတာဒေ၀ီကို ကြိုက်ပေမယ့် နောင်တော်ကို လေးစားပြီး ရာမကို
ကူညီမယ်။ဗုဒ္ဒဘာသာ အရမ်းထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံဆို ရာမ မင်းသားကို ဘုရား အလောင်းတော် အဖြစ်တင်စားမယ်။
ဒသကို ဒေ၀ဒတ် လုပ်မယ်။သီတာဒေ၀ီကို ယသော်ဒရာ၊လက္ခဏာကို ညီတော် အာနန္ဒာ အဖြစ်
ပုံ၇ိပ်တင်မယ်။ပြီးလို့ ရှိယင် တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရတာ ဘုန်းကံကြောင့်တို့ ဘာတို့
မဆိုင်တာတွေ အမွမ်းတင်ကြမယ်။အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘုရင်မင်းမြတ် ကိုလဲပဲ ရာမမင်းကဲ့သို့ တော်ကြောင်း
ရာမမင်းနှင့် ညီမျှကြောင်းတွေ ချီးမွှမ်းခန်းတွေ ဖွင့်ကြမယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ဇာတ်တော် တစ်ခုရေးတယ်ဆိုတာ အဲဒီ့ခောတ် အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ဖြစ်နေတာ
ဖြစ်ချင်တာတွေကို ရေးထားတာလို့ပဲ မောင်ယောမြင်တယ်။
ရေးခိုင်းတဲ့လူကလည်း သူလိုချင်တာ သူဖြစ်ချင်တာရေးခိုင်းမယ်။
ရေးတဲ့ လူကလည်း သူဖြစ်ချင်တာ သူထည့်ရေးချင်တာလေးတွေရေးမယ်။
ကာလဒေသကို လိုက်ပြီးရေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အမှန်တစ်ကယ်လို့ မောင်ယော မပြောပါဖူး။
တစ်ကယ်တမ်း ဒီ ဇာတ်တော်ဟာ ရှိခဲ့တယ် ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုယင်တောင်မှ သီတာဒေ၀ီချစ်ခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ
လေးတင်ပွဲ ကကော တရားမျှတခဲ့ရဲ့လား။
အစပိုင်းတွေမှာ ပုံဖော်ထားတဲ့ ဒသရဲ့ ခွန်အားဗလတွေက ပိုးဟပ်ဖြူတစ်ကောင်လို
ဘာမှ ပုံမဖော်ထားတဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးဆိုတာကိုပဲ ပြသထားတဲ့ ရာမ ဘယ်သူက လက်တွေ့မှာ
ဒသဆိုတာ ၁၀ ခုကိုကိုယ်စားပြုတာလို့ပဲ ယူဆကြမယ်ဆိုယင်တောင်
၁ ခုထဲ ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ရာမက ခွန်အားကို အားကိုးခဲ့တဲ့ ခောတ်မှာ ဘာလို့ အနိုင်ရခဲ့တာလဲ။
ရာမဆိုတဲ့ မင်းသားက ညဏ်နီညဏ်နက် သုံးခဲ့လို့လား။
ဘုန်းတံခိုး ဆိုတဲ့ အရာကို အယင်ကရော အခုပါ ယုံကြည်နေရအုံးမှာလား။
တကယ်တမ်းဆိုတာတွေက ဘုရင်တစ်ပါးက ရေးခိုင်းလို့ ခောတ် အဆက်ဆက်က ဇာတ်ညွှန်းရေးဆ၇ာတွေ
တကယ်တမ်းတော့ သီတာမင်းသမီးကလည်း လှချင်မှ လှမှာပါ။
ကျွန်တော်ဆိုလို ချင်တာက ဒါတွေကို စတင်တော်လှန်ခဲ့တာ စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုလို့ပဲ ဆိုလိုချင်ပါတယ်။
သူ့လက်ထက်မှာ ဒသဂီ၇ိ ကို စတင်ပြီး အရောင်တင်ပြီး ဘယ်နေရာမဆို ဆန့်ကျင်ဖက်
အတွေးအခေါ် ရှိတယ် ဆိုတာ ချပြခဲ့တယ်။(တခြားသူတွေလည်းရှိမှာပါ)
ဆရာချစ်ဦးညိုတို့ ခောတ်မှာ ဆန့်ကျင်ဖက်ကို ချပြခဲ့သလိုပဲ
ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်မှာ အကောင်းမြင်ဆန့်ကျင်ဖက်ဆိုတဲ့ အရာကို ပြန်တည့်ပေးကြယင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
kklatt ယောသား's invitation is awaiting your respon...
Copyright © ဆြာယော၏မှတ်တမ်း - Converted to Blogger by Girly Blogger